Afidhavhiti yeImigration Tafura ZVAKAITWA - Kuenda Kune Dzimwe Nyika
iphone nhema uye chena kuratidza
yangu iphone kumashure kamera haishande
maitiro ekugadzirisa iphone nyoro
Tafura yeafidhavhiti yekutama 2019 - 2020 . A Afidhavhiti yeMari Inotsigira Iri igwaro rinosainwa nemunhu kutambira mutoro wezvemari kune mumwe munhu, kazhinji hama, uyo anouya kuzogara zvachose on USA .
Iye munhu anosaina afidhavhiti anova mutsigiri wehama (kana mumwewo munhu) achiuya kuzogara kuU.S.Mutsigiri anowanzo kuve iye anenge achikumbira chikumbiro chekune imwe nyika kuhama.
Afidhavhiti yeMari Inotsigirwa inosungwa zviri pamutemo. Basa remubatsiri rinowanzoramba richishanda kusvikira nhengo yemhuri kana mumwe munhu ava mugari wemuU.S., kana kudzamara vawana mbiri yemakumi mana emakota ebasa ( kazhinji makore gumi ).
Kana iwe wagadzirira kutanga kuzadza iyo fomu I-864 , afidhavhiti yekutsigira, unogona kushamisika kuti waunotsigira anogona sei kuzadzisa zvinodiwa nemari kuti uve mutsigiri wako. Humbowo hwakapihwa hunofanira kuratidza kuti mhuri yako inotsigira inokwana pamusoro pehurombo hwehurombo .
Mvumo yekuenda kune dzimwe nyika kutsigira hama yekune imwe nyika
Anotsigira anofanirwa kuratidza kuti mari yavanowana ingangoita 125% yeiyo hurombo hurombo. Iwe unogona kuona mune inotevera tafura huwandu hwevanhu vari mumba, gwara uyezve 125% yeakataurwa nhungamiro
* Iyi tafura inoshanda chete kuvagari vematunhu makumi mana nemasere, kunze kweAlaska neHawaii.
Afidhavhiti tafura yekuenda kune dzimwe nyika 2019 - 2020
Aya ndiwo madiki anoshanda kubva muna Ndira 15, 2020
Mari yemuNON mauto ekutsigira nhengo yemhuri
Mhuri Alaska Hawaii Dzimwe nyika uye PR
4 $ 40,938 $ 37.663 $ 32,750
Mari shoma yemasoja kutsigira nhengo yemhuri
Mhuri Alaska Hawaii Dzimwe Nyika nePuerto Rico
Maitiro ekunzwisisa mashoma mashoma ematafura
Izvi zvinoreva kuti musoro wemba ane mhuri yevana anozvipira kumutsigira anofanirwa kunge aine mari inosvika madhora 46,125 pagore.
Sponsors vanove nhengo dzeuto reUS vanongofananidza nehurombo hurombo.
Nzira yekunzwisisa tafura
Iko kune chikamu che kushingaira kwemauto Ndivanaani vari Mauto, Marines, Coast Guard, Mauto Emuchadenga, kana Navy vanofanira kuwana mari yakaenzana ne100 muzana yemari yakatarwa mutsara wehurombo kana chikumbaridzo , inova mari yakatarwa gore rega nehurumende.
Uye ndiyo inoonekwa mutafura yepamusoro muchikamu inoti: zvechiuto. Misiyano inoenderana nenhamba yemhuri yemunhu anenge achinyorera.
Kune avo vasiri mauto, mari dzakasiyana dzinoshanda zvichienderana nekwavanobva. Nekudaro, vanotsigira vanogara mukati Alaska Ivo vanofanirwa kuratidza mari inosvika mazana masere neshanu muzana muzana yehurombo mutsara wenyika iyoyo, iyo yakatoverengerwa gore rino uye ndiyo inoonekwa mutafura iri pamusoro pasi pezita renyika iyoyo. Izvi zvinoshandawo kuvagari ve Hawaii.
Pakupedzisira, vatsigiri vasiri mauto kana vanogara muAlaska kana Hawaii ivo vanofanirwa kuratidza mari pamusoro pe125 muzana yeiyo hurombo hwakagadzwa nemutemo kune izvo zvinozivikanwa semakumi mana neshanu nyika dzinoenderera. Uye zvakare, izvi zvinoshandawo kuWashington D.C. uye Commonwealth yePuerto Rico. Ndihwo huwandu hunowonekwa patafura iri pamusoro mukoramu iri pasi peZororo rematunhu nePR (Puerto Rico).
Mari yemubhadharo yeFomu I-864
Tevere, iwe uchafanirwa kuona kana yako yemhuri mari isingaite 125 muzana yeiyo federal hurombo nhanho zvichienderana nehukuru hwemhuri. Uchishandisa iyo Fomu I-864P
Fomu I-864P inosanganisira akati wandei matafura. Huwandu hwemari inodiwa kuve pamusoro pehurombo hwemari inowanikwa zvinoenderana nekuti anogara kupi (chero mune chero makumi mana makumi mana ematunhu anoti, Alaska, kana Hawaii) uye saizi yemhuri inotsigira. Kushanda kwemauto basa kunogona kukanganisa huwandu hwemari.
Iwe unofanirwa kuverengera yako wega yazvino mari. Kusangana nezvinodiwa kunoenderana nemari yako yazvino yegore. Kana iwe uine basa rimwe chete, izvi zviri nyore. Isa iyo mari yaunotarisira kuita pakupera kwegore. Sanganisira chero mabhonasi kana muhoro unowedzera iwe zvaunotarisira zvine musoro kuti uwane. Iyi inotevera mhando yemari inowanikwa kune yako yaunowana ikozvino:
Mibairo, mihoro, matipi
Alimony uye / kana rutsigiro rwemwana
Inobhadharwa IRA kugoverwa
Mitero inobhadharwa nemari
Mubhadharo wevashandi nekuremara
Inobvisirwa Social Security mabhenefiti
Ehezve, mabhenefiti eruzhinji anoratidzwa nenzira senge setampu dzechikafu, SSI, Medicaid, TANF, uye CHIP hazvifanirwe kuverengerwa mumari yako.
Kusakwanisa kusangana nezvinodiwa zvemari
Kana iwe parizvino uchishanda uye uine mari yemunhu inosangana kana kudarika 125 muzana yeiyo federal hurombo mutsara kana (zana muzana, kana zvichibvira) pakukura kwemhuri yako, haufanire kunyora chero mari yemumwe munhu.
Nekudaro, kana mari yako wega isingakwanise kuzadzikisa zvinodiwa nehukuru hwemhuri yako, inogona kusangana uchishandisa chero chinotevera chemubatanidzwa:
Mari inowanikwa kubva kunhengo dzemhuri kana vanovimba vanogara mumba mako kana veimba vanovimba kana vanovimba vakanyorwa pane yako achangopfuura federal mari yemutero kudzoka uye vari kuda kusaina Fomu I-864A , uye kana vane makore angangoita gumi nemasere pavanosaina fomu. Ivo inhengo dzemhuri dzinoda kuve pamwe chete vanoita basa rekutsigira. Nhengo dzemhuri dzinogona kuve wako wawakaroorana naye, mwana mukuru, mubereki, kana mukoma; kugara mumba mako Uchapupu hwekugara mumba mako nehukama hunofanirwa kupihwa Kana uine vasina hukama nevanovimba vakanyorwa pamutero wako, unogona kusanganisira mari yavo zvisinei nekwavanogara. imba yezvinhu zvisiri pamutemo, senge mari kubva mukubhejera zvisiri pamutemo kana kutengesa zvinodhaka, kuzadzisa zvinodiwa nemari, kunyangwe kana nhengo yemumba ikabhadhara mutero pane iyo mari yeFomu I-864A inopedziswa pamwe chete nevanhu vaviri: anotsigira anonyorera uye nhengo yemhuri. Siginecha yakasanganiswa yefomu iyi inoita chibvumirano chekuti nhengo yemumba inoitisa basa pamwe chete nemubatsiri wekutsigira vanhu vadomwa pafomu iri. Fomu yakasarudzika I-864A inofanirwa kushandiswa kune yega nhengo yemhuri iyo mari uye / kana zvinhu zviri kushandiswa nemubatsiri kuti akwanise. Fomu I-864A rinofanira kumisikidzwa panguva imwe chete neFomu I-864.
Masiginecha paFomu I-864A anofanirwa kuziviswa negweta roruzhinji kana kusainwa pamberi pevatorwa kana mukuru wevamiriri.
Vanogona Mubvakure Mari
Mari yaunogona kuwana yekune imwe nyika inogona kushandiswa kana iyo mari ichizoramba ichibva kunzvimbo imwechete mushure mekupinda munyika, uye kana angangove mutorwa parizvino achigara mumba mako. vanofanirwa kuenderera kubva kunzvimbo imwechete mushure mekunge iye ave mugari wepamutemo anogara zvachose. Humbowo hwemubhadharo wemari imwechete unofanirwa kupihwa.Kana iye wekune chinangwa wekubva kune imwe nyika ari imwe hama, mari yacho inofanirwa kuenderera kubva kunzvimbo imwechete mushure mekunge awana chinzvimbo chepamutemo chekugara, uye mutorwa anozvipira anofanira kugara newe pari zvino paunogara. . Humbowo hunofanirwa kupihwa kutsigira zvese zvinodiwa; zvisinei, munhu ane chinangwa chekuenda kune ino kesi haafanire kuzadza Fomu I-864A, kunze kwekunge iye wekuenda kune imwe nyika aine mumwe wake uye / kana vana vachifamba naye. Mune ino kesi, chibvumirano chine chekuita nekuroora uye / kana kutsigira kwemwana.
Iko kukosha kwezvinhu zvako, midziyo yenhengo chero yemumba yakasaina Fomu I-864A, kana iyo midziyo yeanoda kutama.
mubatanidzwa Mubatsiri wemubatanidzwa ane mari uye / kana zvinhu zvakaenzana zvinosvika zana nemakumi masere neshanu muzana remazano ehurombo.
Hurumende inogona kutsvaga kuongororwa kwechero ruzivo rwunopihwa kana kutsigira fomu iri, kusanganisira basa, mari, kana zvinhu nemushandirwi, masangano emari kana mamwe masangano, iyo Yemukati Revenue Service.
Totality yemari chinzvimbo
Kunyangwe pavakapihwa chibvumirano chechimiro cheI-864, chivimbiso chinotsigira, uye kurambidzwa kwemazhinji mapato eruzhinji kubatsirwa neuchapupu hwezviwanikwa zvevazhinji vatorwa, vakuru vakuru vanofanirwa kutarisa pamusoro pechibvumirano chakakwana chekutsigira zvimwe zvinhu zvechaji zveveruzhinji.
Iyo Chikamu 212 (a) (4) (B) inonyora zvinhu izvo zvinofanirwa kutarisirwa nemukuru wehurumende pakuita sarudzo yehofisi yeruzhinji. Chivimbiso chekutsigira, Fomu I-864, chingori chimwe chezvinhu zvekutarisa. Vatungamiri vehurumende vacharamba vachifunga nezvese mamiriro emari emubatsiri uye iye anenge achinyorera kuti asimbise kusvika pazvinokwanisika kuti iye anenge achizowana rubatsiro rwakakwana rwemari uye haakwanise kuve muripo weveruzhinji. Izvi zvinoreva kutarisa zera, hutano, dzidzo, hunyanzvi,
Chipo chebasa panzvimbo pemari yaunowana
Chipo chinotendeseka chebasa kumunhu anenge achitsvaga vhiza haakwanise kutsiva kana kuwedzera afidhavhiti yekutsigirwa kwakakwana. Iwo mutemo hauite chero kupihwa kwekutarisa kwekupihwa mabasa panzvimbo yeI-864. Saizvozvowo, kupihwa basa hakugone kuverengerwa kune iyo 125 muzana hushoma mari. Kupihwa kwakadai kunogona kutarisirwa kana uchiongorora kugona kwemunyoreri kukunda chero mari yeruzhinji mukusagamuchirwa pasi.
Shanduko muhurombo maitiro
Kana marongero ehurombo akachinja pakati penguva iyo munyoreri akasaina iyo I-864 uye kubvumidzwa kwevisa yekuenda kune imwe nyika, munyoreri / mutsigiri haafanire kufaira I-864 nyowani. Chero bedzi iyo I-864 yakamisikidzwa nemumiriri wevamiriri mukati megore rimwe kubva pazuva rakasainwa, I-864 nyowani haidiwe. Kuongorora kuchaitwa zvichibva pane maringe nhungamiro mukuita pane I-864 zuva rekutepa.
Kana iwe ukatambira pekugara uye zvimwe zvinowoneka mabhenefiti pachinzvimbo chemubhadharo, unogona kuverenga iwo mabhenefiti semari. Unogona kuverenga mari isingabhadhariswe mutero (seyemubhadharo wekugara wevafundisi kana vemauto), pamwe nemari inobvisirwa mutero.
Iwe unofanirwa kuratidza hunhu uye huwandu hwemari ipi neipi isina kuiswa semubhadharo kana muhoro kana imwe mari inobhadharwa. Inogona kuratidzwa nezvinyorwa paFomu W-2 (senge Tafura 13 yezvikamu zvemauto), iyo Fomu 1099 kana zvimwe zvinyorwa zvinoratidza mari inotorwa.
Ichi chinyorwa chinodzidzisa. Haisi yezano repamutemo.
I-864P, 2019 HHS Urombo Mirayiridzo yeAvidaviti yeKutsigira
Afidhavhiti yeKutsigira | USCIS
Kuenda Kunze Kunze Kwehukama
Nzira yekuziva sei yekufambisa nyaya NUMBER?
Chii chinonzi kuongororwa kwechiremba kwekuenda kune dzimwe nyika kunosanganisira?
Jobho Anopa Tsamba Yekutama
Chii chinonzi immigration felony?